Ngaba "i-Warp Drive" evela kwiNkwenkwezi enokwenzeka?
Ngaba ukhawuleza kunokugqithisa ukukhanya okubonakalayo kwi Star Star Trek?
Esinye sezixhobo ezicwangcisiweyo zesebe phantse yonke i- Star Trek isiqephu kunye nefilimu yinkwenkwezi yeenkwenkwezi zokuhamba nge-flash- speed and beyond. Oku kwenzeka ngenxa yenkqubo yokuqhubela phambili eyaziwayo kwimbonakalo njengemoto ye- warp .
Yintoni iWarp Drive?
I-Warp drive ayikhoyo okwamanje. Kodwa, kunokwenzeka ukuba kunokwenzeka. Ivumela iinqanawa ukuba zifikelele kwi-space ngokuhamba ngokukhawuleza kunokukhawuleza kokukhanya. Njengokuba siyazi, lo ngumlinganiselo wokugqibela wezityalo ze-cosmic.
Akukho nto inokuhamba ngokukhawuleza kunokukhanya. Ngokutsho kweengcamango zika-Einstein malunga nokuzalwa , kuthatha ubungakanani obungapheliyo bamandla ukukhawulezisa into kunye nobunzima ukuya kwijubane lokukhanya . Ngoko, kubonakala ngathi ukuba ne-spacecraft ehambahambayo (okanye idlulile) ukukhawuleza kokukhanya akunakwenzeka.
Nangona kunjalo, ukuqonda kwethu okwangoku kwindlela ye-physics ngayo indlela ukuhamba okulula kukuthintela ithuba lokuba uqobo luhambe okanye ngaphesheya kwejubane lokukhanya. Enyanisweni, abanye abantu abaye bahlolisisa le ngxaki bathi ibanga lexesha elide lexesha-mali landa ngokukhawuleza kunokukhawuleza kokukhanya, ukuba nje ixesha elifutshane. Ukuba oko kuyinyaniso, i-warp drive ingayisebenzisa ngokunxulumene nale nto. I-drive iya kusebenzisa amanani amakhulu wamandla (ekhishwe kwimiba- ukubhujiswa kwe-intanethi "kwi-corepress" yemkhunjini) ukudibanisa inkwenkwezi kwi-bubble "ephikisayo" indawo ejikelezile. Isikhathi sendawo emva kwesitya sande, ngelixa i-space-time continuum icinezelwe ngaphambili.
Umphumo wemnxeba kukuba iinqanawa iqhutywe kunye nexesha lokuchitha ixesha kunye neenkontileka malunga nayo.
Nantsi enye indlela yokucinga malunga nendlela i-warp drive isebenza ngayo: inkwenkwezi isisigxina ngokukhawuleza kwimeko yendawo yengingqi. Umkhombe ngokwawo awushukunyanga, kodwa isalathisi yendalo yonke kwaye ihamba neenkwenkwezi kunye nayo.
Imveliso evuyisayo yile nto kukuba i-starship ingafikelela kwimiphumo engathandekiyo njengexesha lokunyuka kunye nomphumo omkhulu wokukhawuleza emzimbeni womntu, oya kuphazamisa imigca yesiganeko yamabali.
Ukusebenzisa umqhubi we-warp bekuyahlukahluka ekuhambeni kuyo yonke indalo usebenzisa izibungu. Lezi zixhobo eziye zenza ukuba i-spaceships ihambe ukusuka kwelinye iphuzu ukuya kwelinye ngokukhupha nge-hyperspace. Ngokuchanekileyo, babeza kukuvumela ukuba uthathe indlela emfutshane, ekubeni iinqanawa zihlala ziboshwe kwixesha eliqhelekileyo lexesha.
Ngaba Ngamanye Ngamhlanje Singaba ne-Warp Drive?
Akukho nto ekuqondeni kwethu kwangoku kwe-physics ye-theory evimbela i-warp-type drive ngaphandle kokuphuhliswa. Nangona kunjalo, ingcamango yonke isengendawo yokucinga. Abantu basebenza ngeendlela zokuphumeza olo phuhliso. Nangona kunjalo, kufuneka basombulule i-LOT yemicimbi yokwenza ukuba kwenzeke.
Ukuze udale kwaye ugcine umbhobho we-warp (onzima umngeni ukuba awufuni ukutshabalalisa umkhombe wakho xa ususebenzisa) uhlobo lwezinto eziyimfuneko luya kuba khona kunye nobunzima obubi. Asikwazi nokuba ubunzima obubi (okanye amandla ambi) akhoyo naphi na kwindalo yonke. Ukuba zikhona, "azifunyanwanga", kodwa.
Kodwa, cinga ukuba loo nto ikhona. Emva koko, umntu unokuqulunqa inkqubo ye-warp drive. Enyanisweni, ubuncinane ubunjalo bolu hlobo luye lwaqwalasela ingqalelo: i- Alcubierre drive .
Ngaloo iteration ye-drive ye-warp, inkwenkwezi yayiza kukhwela "umtsalane" wesikhathi-sikhala, kufana ne-surfer igibela umtshini olwandle. Kodwa ngenxa yokuba i-drive inkqubo ingaba yinto enokwenzeka, ayithethi ukuba inokwenzeka. Umlinganiselo omkhulu wamandla adingekayo ukwenzela ukwandiswa okufunekayo kunye nokuchithwa kwexesha-sikhala liza kudlulela umkhiqizo weLanga.
Ngaphandle komthombo wamandla njengento echazwe kwi-series ye- Star Trek , ukuba ne-warp drive yindlela ende. Okona kuncinci, asinakho ukuqonda okwaneleyo malunga nemvelo kunye nokubunjwa kwendalo yonke ukuvavanya oko kwenzekayo kwindawo yokukhawuleza kunokuhamba-ukukhanya.
Kuya kuthatha ixesha kunye nophando oluninzi lokuqhubela phambili kwindawo apho abantu bangakwazi ukuhlakulela i-warp drive. Kuze kube ngoko, kuya kufuneka sikuvuyiswe ukubona iqhutywe kwi-movie yesayensi kunye nemiboniso yeTV.
Ehlelwe nguCarolyn Collins Petersen.
Ingqungquthela yokuLungiswa kweMigodi
Ukuqonda iIridium Flares
Imbali kunye nekamva lePhobos, iMarine 'yeNyanga ezayo
Izinto Ezi-6 Ukuze Ukwazi Ngama-Telescopes Ngaphambi kokuba uthenge
Fumana i-Sky Map elandelwe kwindawo yakho
I-Biography yeKen Mattingly, i-Apollo kunye ne-Shuttle Astronaut
Indlela abaAstronauts baqeqesha ngayo indawo
Imbali ye-National Aeronautics kunye ne-Administration Administration (NASA)
I-Lunar Eclipse neGazi inyanga
Iiplanethi kunye nokuzingela i-Planet: Ukufuna i-Exoplanets
I-Whale, i-Dolphin okanye i-Porpoise-Iimpawu ze-Cetaceans ezahlukeneyo
Iindaba eziNyaniso zamaDemoni
UkuCwangcisa iZikhokelo zoMqhudelwano weComputerboard
UBerengaria waseNararre: U-Queen Consort kuRichard I
Ii-Wheel Deep Concave: I-New Design Trend
Izitayela ezi-8 eziphezulu zeTango
Isikhokelo sokuthenga iPetter
Geneva College Admissions
I-Biography ye-King Louis XVI yaseFransi
Imibuzo Yemibuzo Yengxoxo Yobusuku "Ebusuku" nguElie Wiesel
Iingxelo zeVil Virgil
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iGridare
Khangela ngaphandle, ngo-Ernest Hemingway
I-Table Tennis / i-Ping-Pong Isisiseko esisisiseko - I-Forehand Pendulum Sidespin Serve
Ingxelo yokuThatyathwa kwaMntu omnye kunye nemizekelo
Indlela yokutshintsha i-Sensor ye-Speed ​​Speed
Isicatshulwa seSigaba Inkcazo
Izizathu zokuba nesifundo soMlingani
IiPold Packs kunye neAmpothermic Reactions
Isicwangciso seSifundo seKindergarten sokuQinisekisa nokuFundisa
Ukudlala i-Surface kunye nePaint Paint yokwakha i-Ping-Pong Table
Inkathaphu Inkcazo, iMbali, kunye neNdidi
Buyela esikolweni kwiiNdawo zeZikolo eziNye
IYunivesithi yaseChitordia iAcmissions Admissions
Amaxesha oTyelelo lweeNsimbi ezinamandla